China Self-Aligning Ball Ukunikela abenzi kunye nabathengisi | I-LGGB
Ngamacandelo amabini e-cylindrical okanye i-tapered kunye ne-retainers ezenziwe ngephepha lesinyithi okanye i-resins zokwenziwa, iibheringi ziimpawu zendlela yazo eyakhiwe ngocingo lwangaphandle evumela ukungahambelani kakuhle ngaphakathi kwinqanaba le-3 eliphakathi kwendandatho yangaphakathi kunye nomsesane wangaphandle, ukuze kuhlawulwe ukugxila kunye nokuphambuka iimpazamo.
Iibheringi zebhola ezizimeleyo ezizilungelelanisayo zinendlela yomdyarho kwisangqa sangaphandle kunye nomdyarho ophindwe kabini kwisangqa sangaphakathi. Eli nqaku linika iibheringi iipropathi zabo zokuzilungelelanisa, zivumela ukungalungelelani kakuhle kwe-shaft malunga nendlu. Ke ngoko zilunge ngakumbi kwizicelo apho ukungalungelelani kunokuvela kwiimpazamo zokunyusa okanye ukusuka kuphambuko lweshafti.
Umqolo kabini iibheringi ibhola self-ulungelelwaniso ubukhulu becala zisetyenziselwa ukuthwala imithwalo iphiramidi ebonisa ubushushu kunye imithwalo ukukhanya yezihlunu, kodwa abakwazi ukuthwala imithwalo yezihlunu ecocekileyo.
Imilinganiselo yemida (mm)
Egqithileyo Iiyunithi zeebheringi kunye nezindlu ze-UCFC Series
Okulandelayo: Ukulenza mqengqeleki Ukunikela
Iiyunithi zeebheringi kunye nezindlu ze-UCFC Series
Ukuthwala izindlu ze-SB series
Iiyunithi zeebhere kunye neZindlu ze-UCFL Series